विशेष :: Kitab Kiro - Complete Book News
पाँच राम्रा निबन्धकृति
२०७७ पुस २२ गते
निबन्धकार तथा वृत्तचित्र निर्माता शेखर खरेल नेपाली र अंग्रेजी साहित्यका पारखी हुन् । अखबारी लेखनमा बढी सक्रिय खरेलको ‘मैले नदेखेका हिप्पी’ निबन्धकृति प्रकाशित छ । नेपाल तथा बेलायतबाट उच्च शिक्षा अध्ययन गरेका खरेल निबन्ध पठनले समाज, साहित्य र समयबोध गराउने मान्यता राख्छन् । उनले अन ...
पाठक बन्दैछन् प्रविधिमैत्री, अनलाइनमार्फत् घरैमा पुस्तक
आफूलाई नयाँ पुस्तकको गन्धले नै आकर्षित गर्ने विश्लेषक हरि शर्माले बताएका थिए। साहित्यकार शारदा शर्माले पनि करिब दुई वर्षअघि दिएको अन्तर्वार्तामा आफूलाई नयाँ पुस्तकको गन्ध खूब मन पर्ने बताएकी थिइन्। धेरै नेपाली पाठक पसलमै गएर ओल्टाइपल्टाई पुस्तक हेरेर, गन्ध सुँघेर किन्ने बानी परेका छन्। वन्डर बुक्सले ...
पशुपन्छीले पनि गर्छन् बलात्कार !
पशुपन्छीमा पनि विछोड हुन्छ ? के पशुपन्छीले पनि बलात्कार गर्छन् ? वन्यजन्तु पनि समलिंगी हुन्छन् ? जनावरले पनि संगीत सुन्छन् ? यी प्रश्न धेरैको मनमा उब्जिन सक्छन् । यी प्रश्नको उत्तर कहाँ भेटिएला ? प्रश्नमाथि उब्जिने अर्को प्रश्न हो यो । तर, लेखक ददि सापकोटाले यी र यस्तै विषयवस्तुलाई समेटेर पुस ...
२०७४ असोज २८ गते
-घनश्याम खड्का दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिकाले हानेको बमले ध्वस्त भएको जापानी सहर नागासाकीमा जन्मिएका काजुओ इसिगुरोनोबेल पाउँदा अरूलाई भन्दा आफूलाई एक टुक्रा चीज बढी दिएजस्तो ठान्छन् । नोबेल समिति ठान्छ, ‘गहन संवेगको शक्तिले भरपूर’ उपन्यासहरूका कारण इसिगुरोहारुकी मुराकामी वा सलमान र ...